विदेश जाने होइन, विदेशबाट पैसा नेपालमा आउँछ::Best News Experience from Nepal
नारायणप्रसाद पन्थ अध्यक्ष रोटरी क्लब अफ बुटवल
रोटरी क्लव अफ बुटवलको वर्ष २०१८/१९ का लागि प्राज्ञिक व्यक्तित्व रोटरियन नारायणप्रसाद पन्थ अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।
समाजसेवी एवं शैक्षिक व्यक्तित्व पन्थ त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यापक हुन् । रुपन्देहीका दुई दर्जन बढी सामाजिक संघ संस्थामा आवद्ध उनी शिक्षा क्षेत्रको विज्ञका रुपमा स्थापित छन् । नेपाल संस्कृत विश्व विद्यालयबाट विद्यावारीधि अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्याएका पन्थ विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा पठन पाठन हुने झण्डै दुई दर्जन पाठ्यपुस्तक लेखकका रुपमा पनि स्थापित छन् । उनै पन्थसँग अखबार न्यूजले रोटरिका विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानी– सम्पादक
यहाँ रोटरी क्लव अफ बुटवलको भर्खरै अध्यक्ष हुनु भा छ, कस्तो टिम छ ?
धन्यवाद,रोटरी क्लव अफ बुटवलको वर्ष २०१८ र १९ का लागि मेरो अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको छ । यसमा थुप्रै साथीहरू हुनु हुन्छ । क्वलको निर्वतमान अध्यक्षमा राजेन्द्र लम्साल, निर्वाचित अध्यक्षमा डिल्लीकुमार श्रेष्ठ, मनोनित अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. ताराप्रसाद उपाध्याय, सचिवमा दया भण्डारी हुनु हुन्छ । क्लवको कोषाध्यक्षमा यदुनाथ पाण्डे, सहसचिवमा रोमनाथ शर्मा, सह कोषाध्यक्षमा रामवहादुर भण्डारी लगायतका साथीहरू हामी छौ ।
क्लवको प्रशासन समितिको निर्देशकमा सूर्य राना, परियोजना सेवा समितिको निर्देशकमा बोनिन पिया, मेम्मरसिप समितिको निर्देशकमा खेम पुन, रोटरी फाउन्डेसन समितिको निर्देशकमा खेमनारायण पराजुली, जनसम्पर्क समितिको निर्देशकमा प्रज्ववल थान्जुु, नयाँ पुस्ता समितिको निर्देशकमा करुण खनाल, साक्षरता समितिको निर्देशकमा मधुप्रसाद अर्याल, सर्जेन्ट एट आम्स(सचेतक) प्रथममा यादव घिमिरे, सर्जेन्ट एट आम्स द्वितीयमा लक्ष्मण श्रेष्ठ, सम्पादकमा कृष्ण पराजुली , सह सम्पादकमा राजेन्द्रबहादुर जिसि र क्लव मेन्टर अजयमान श्रेष्ठ रहनु भएको छ । यो जुझारु टिमले समाजिक सेवाका कार्यमा हामीले अव्वल भूमिका निर्वाह गर्दछौ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
रोटरी भनेको कस्तो क्लव हो ? यसको स्थापना कहिले भयो ?
“Service Above Self” अर्थात् स्वार्थभन्दा माथि सेवा भन्ने रोटरी इन्टरनेशनलले मूलमन्त्रबाट प्रेरित भई समुदायमा आधारित समाजमा सेवा गर्ने उद्देश्यले संचालित क्लवका रुपमा हामीले रोटरीेका रूपमा स्थापित छ । आ आफ्नो व्यावसायिक तथा पेशागत अनुभव र क्षमताहरूलाई एकीकृत गरी समय व्यवस्थापनका आधारमा समय निकाली सामुहिक रूपमा मानवीय सेवामा समर्पित, उच्च आचरणका साथ काम गर्नेे कार्य क्लवले गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी, सदासय, विश्वशान्ति, समाजमा रहेका विपन्न वर्ग तथा समुदायको हित तथा सहयोगको लागि यो संस्था सँधै अग्रसर हुँदै आएको छ । यो संस्था मुनाफा रहित संस्था हो । केवल समाज सेवाको लागि सन् १९०५ फेवरअरीमा अमेरिकामा रोटरी क्लवको स्थापना भएको हो । समाज रुपान्तरणका लागि यसको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
समाज रुपान्तरण गर्ने कार्य कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?
रोटरीको मूल मन्त्र नै “स्वार्थ भन्दा माथि सेवा” अर्थात”Service Above Self” आफूभन्दा माथि रहेर, अर्थात् स्वार्थ भन्दा माथि सेवा भन्ने मर्मका साथ स्थापित यो क्लव मानवीय सेवा गर्ने कार्यमा विश्व भर क्रियाशील छ । यो क्लव फ्रेन्सीप, फेलोसीप, सहित सर्भिस गर्ने बौद्धिक तथा पेसागत क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तिहरूको अन्र्तराष्ट्रिय संस्था हो । समय व्यस्थापन, परियोजना र आर्थिक पारदर्शीता अन्य क्लवका भन्दा यसका नितान्त नौला छन् । यो क्लवका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु शुन्य लागतमा सम्पन्न गरिन्छन् । किनभने परियोजना सम्पन्न गर्न जादाँ,आउँदा, खादा, बस्दा र सबारी साधनमा लाग्ने जतिपनि रकम हो रोटरीयन स्वयं आफैले खर्च गर्ने गर्दछौ । जवकी अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था वा क्लवका कार्यक्रममा टिए.डिए.को व्यवस्था हुन्छ,तर यस्ता कुरालाई रोटरीमा प्रवेस दिइदैन ।
समाज रुपान्तरण गर्न रोटरीले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको छ । जस्तै विश्वबाट पोलियो उन्मूलन गर्न कामका लागी रोटरीबाट संभव भएको हो । संसारभरी ३ वटा देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र नाइजेरिया बाहेक बाँकी सम्पूर्ण देशहरुमा पोलियो निर्मूल भएको अवस्था छ । त्यस्तै वाल स्वास्थ्य, आधारभुत शिक्षा, द्धन्द्ध व्यवस्थापन, वाटर एण्ड सेनीटेसन आर्थिक विकास व्यक्ति विकास, समाज विकास, आदिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । समाजमा यस्ता कार्यहरु गर्नु समाज रुपान्तरणकालागि भूमिका खेल्नु नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । यसबाट समाज रुपान्तरणमा संम्भव छ ।
तपाइँ रोटरी क्लब आफ बुटवलको अध्यक्ष भएपछि कस्ता सामाजिक कार्य गर्ने योजनामा हुनु हुन्छ ? कहिले अन्त्य हुन्छ ?
भर्खर मात्रै म क्लवको अध्यक्षमा चयन भएको यहाँहरुलाई थाहा नै छ । आफ्नो कार्यकालमा सबै भन्दा राम्रो काम गर्नु पर्छ भन्ने अपेक्षा त जो सुकैमा पनि हुनु स्वभाविक हो । केहि त क्लवका नियमित कामहरु हुन्छन् । तर अहिलेको कार्यकालमा रोटरी फाउन्डेसन अन्र्तगत २ बटा विद्यालयलाई रोटरी ग्लोवल ग्रान्टद्धारा विद्यालयको स्तर बृद्धि गर्ने योजना छ, त्यस्तै कुनै एउटा क्याम्पसलाई लक्षित गरेर शौचालय र पिउने पानीको व्यस्थापन गर्ने योजना छ । रोट्याक्ट,इन्ट्याक,इनर हुईल र आर.सि.सि.सँंग हातेमालो गर्दै क्लवहरूको क्षमता बृद्धि गर्ने उद्देश्य छ । यस्ता थुप्रै कामहरू छन् अहिले हामीले गर्नु पर्ने साइवर क्राइमसम्बन्धी जनचेतना मुलक कार्यक्रम,ट्राफिक जनचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम,लागु पर्दार्थको दुव्र्यसनीहरूका निम्ती कार्यक्रम, दुर्गम स्थानमा महिलाहरूलाई लक्षित गरि स्तन क्यान्सर र पाठेघर परिक्षण लगायतका विषयमा स्वास्थ्य शिविर संचालन गरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच भन्दा बाहिर रहेका महिलाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहको छ । यसको साथै विभिन्न निकायहरुसँग समन्य गरि जेष्ठनागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गरि समाज रुपान्तरणका निम्ती सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने उद्देश्य छ ।
यहाँले भनेको कार्यकालको कुरामा म २००४ र ५ मा क्लवमा प्रवेश गरेको हुँ । निरन्तर रुपमा सेवामा समर्पित छु । जिवन भरि समर्पित भैरहने छु । तर कार्यकालको कुरा छ । जुलाई १ बाट काम शुरु गरि जुन मसान्त सम्म ठिक एक बर्ष मेरो कार्यकाल हुन्छ । सम्पूर्ण आफ्ना योजनाहरु यहि समयमा सम्पन्न गर्नु पर्छ ।
रोटरी क्लबमा सदस्य बन्ने मापदण्ड के हो ?
तपाई यदि रोटरी क्लबको सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम क्लबको नियममा बस्नुपर्छ । क्लबको प्रत्येक हप्तामा नियमित १ घण्टाको बैठक हुन्छ । सो बैठकमा क्लबको कुनै सदस्यको आमन्त्रणमा तपाई उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ । यसरी घटीमा ३ पटक नियमित बैठकमा उपस्थित हुनुभई क्लबको विविध पक्षको जानकारी लिन सक्नुहुन्छ । यदि तपाई सदस्य बन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने बैठकमा निवेदन दिनु पर्छ र तपाईको निवेदनबारे क्लबको बोर्ड बैठकले निर्णय गर्छ । तपाई बोर्डले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी सदस्य बन्न सक्नुहुन्छ । बोर्डले तोकिएको नियमित शुल्क रोटरी अन्तर्राष्ट्रिय डिष्ट्रिक्ट शुल्क तिर्नु पर्छ, सेवाको भावना हुनु, कुनै पेशा वा व्यवसायमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम रहेको हुनु अनिवार्य छ ।
रोटरी क्लबमा उच्च वर्गका व्यक्तिमात्र सदस्य हो भन्ने छ नि ?
समाजमा यस्तै भ्रम फिजिएको छ । यहाँले भने जस्तो त मलाई लाग्दैन । रोटरी क्लब धनीमानीहरुको संस्था होइन । धन भएर पनि समाजसेवा, मानवीय सेवा गर्ने मन छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई यस संस्थामा स्थान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर सामाजिक कार्य गर्ने इच्छा भएका व्यक्तीहरू स्भाविक रूपले आर्थिक सामाजिक रूपमा स्थापित भएकै हुन्छन् । क्लवले निर्धारण गरेको बार्षिक शुल्क बुझाउन सक्ने व्यक्ति मात्र यसका सदस्य हुन सक्छन् । उच्च बर्गका व्यक्ति मात्र सदस्य हुनु पर्छ भन्ने कुरा गलत हो ।
विदेश घुम्ने माध्यम क्लव हो भनिन्छ नि ?
गलत, यो अन्र्तराष्ट्रिय संस्था हो । प्रत्येक वर्ष यसको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन विभिन्न देशमा हुने गर्दछ,रोटरीयनहरू उक्त सम्मेलनमा भाग लिन जानु पर्दछ,यो अवसर रोटरीले जुराएको छ । जस्तै बर्ष २०१८ Toronto, बर्ष २०१९ मा Hamburg, बर्ष २०२० मा Honolulu बर्ष २०२१ मा Taipei बर्ष २०२२ मा Houston USA बर्ष २०२३ मा Warsaw, Poland बर्ष २०२४ मा Singapore मा गरी सात बर्षको अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलनको कार्ययोजना अगाडी आइ सकेको छ । ती सम्मेलनमा रोटरीको सदस्यको हैसियतले भाग लिन जानु स्वभाविकै हो । तर एउटा कुरा सबै मानिस एक हुँदैन , सबैको विचार एउटै हुँदैन । केही व्यक्तिहरु विदेश पलायन भएका होलान्, उनीहरु आफ्नै व्यापार व्यवसाय, अध्ययन तथा व्यक्तिगत कारण विदेशमा बसेका होलान् । हामीले एउटा कुरा भुल्नुहुँदैन, यो रोटरी एक विशुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संस्था हो ।
रोटरीयनबाट जम्मा गरेको सबै पैसा बिदेश जान्छ भन्ने आरोप छ नि के भन्नु हुन्छ ?
सबै भन्दा ठुलो कुरा बुझाइमा कमि छ, यहाँले भने जस्तो पैसा विदेश जाने होइन बरू विदेश बाट पैसा नेपालमा आउँछ । विलग्रेट भन्दा पछिको विश्वमै सबै भन्दा ठूलो कोष भएको संस्था रोटरी इन्टरनेश्नल नै हो । रोटरीयनले प्रति वर्ष जम्मा गरेको ५९.५ डलर रकम प्रति वर्ष त्यो कोषमा जम्मा हुने गर्दछ । हामीले समाज रुपान्तरणका निम्ती बनाइएको परियोजनाका निम्ती त्यही कोषमा रहेको रकम दोब्बर भन्दा बढि गएर आउने गर्दछ । जस्तो बुटवलको मुटु अस्पतालमा स्थापना क्याथल्याव परियोजनाकालागी हामी साथीहरु मिलेर एक करोड जम्मा गर्यौ रोटरी फाउण्डेसनबाट साढे पाँच करोड रकम परियोजनाका निम्ती आयो । लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा पचास लाखको लागतमा अक्सीजन जेनेरेशन प्लान्ट भर्खरै आएको छ । बुटवल उप महानगरपालिकामा दमकलले सेवा प्रदान गरेकै छ । रोटरी बुटवलको एम्बुलेन्सले सेवा प्रदान गरेकै छ । आम्दा अस्पतालमा करोडौको परियोजना शुरु हुदै छ । लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल र आम्दा बुटवलमा जन्मदै जन्डीस भएका नब जात शिशुलाई अन्यत्र रिफर गर्नु पर्ने परिस्थितीमा उपचार कक्ष र उपकरणहरूका निम्ती रकम कहाँबाट आयो । यस्ता सयौ कामहरू रोटरी क्लवले गरेको छ । अब भन्नुस पैसा नेपाल बाहिर जान्छ की ? आउँछ ।